Iintyatyambo zeSapporo @ Kopi Valley, Kundasang Sabah - I-Airbnb
Iintyatyambo zeSapporo @ Kopi Valley, Kundasang Sabah
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguKopi
Ndibuliswe kusasa ngomoya opholileyo, uhlaza olubukekayo kunye neenkwenkwezi ezikwanga ebusuku. Umbono ophazamisayo ngokupheleleyo ukusuka kwimini ukuya kusasa.
I-Kopi Valley, ibekwe kwiinduli ezinoxolo phakathi kohlaza, iifama kunye nembonakalo entle, ejonge ngasemva kweNtaba. I-Kinabalu ehlala kwindawo ephakamileyo yeemitha ezili-1500 ngaphezu komphakamo wolwandle eKampung Mesilau Kundasang Sabah.
Indawo yethu yokuhlala inezindlu ezi-6 ezizimeleyo ezinemigangatho ephindwe kabini kunye nendlu yonke enamagumbi ama-5 een-suites anemixholo eyahlukeneyo.
I-Sapporo Blossoms ligumbi eline-ensuite yaba-3 kumgangatho wokuqala kwindlu yonke enokuhlalisa ukuya kutsho kwi-13 pax yeendwendwe ngexesha. Kuthetha ukuba, ukuba unepax eyaneleyo, ungabhukisha indlu yonke enamagumbi ama-5 e-ensuite kwaye ube nemfihlo eninzi.
Igumbi ngokwalo ligumbi lokulala elinegumbi lokuhlambela elincanyathiselwe. Ikhitshi kunye negumbi lokuhlala ziqhele ukwabelwana kumgangatho omnye ngelixa ipatio ikumgangatho ophantsi. Ungonwabela impepho epholileyo ekhitshini eligqunywe ngaphandle ngelixa ulungiselela isidlo sakusasa kwaye ujonge ngasemva kweNtaba iKinabalu okanye ulwandle olunamafu ekuseni.
Ipatio esezantsi ekwabelwana ngayo ngokuqhelekileyo ixhotyiswe ngefriji enkulu, izitulo zomgangatho kunye neetafile zokhuni.
Zonke izixhobo zokupheka kunye nezixhobo zilungiselelwe wena. Ungasibuza ukuba ungathanda ukuba negrill okanye i-steamboat, sinikezela ngenkonzo yokurenta kwizixhobo (umngxuma webarbecue owakhe kubandakanya umsi wamalahle / imbiza ye-steamboat) kunye nomrhumo omncinci (kubandakanya ukucoca), yonke into oyifunayo kukuthenga entsha. izithako ezivela kwimarike yasekuhlaleni.
Uya kufumana lonke uhlobo lweentyantyambo ezinomdla ozityalileyo okanye zasendle kunye ne-Instagrammable indawo kwigadi yethu njengoko le yindlela yethu yokuphila yendalo.
Unokuhambahamba ujikeleze iilali, indawo enobuhlobo apho unokujonga khona kwaye uthi Molo kubemi balapha.
Umbuki zindwendwe ngu- Kopi
Sathi sesona khaya sifudumeleyo, kuba sihlala ekhaya, ungafika nithethe emini. Kusoloko kukho umntu okwimeko kaxakeka kwaye sinezindululo zabakhenkethi esinokukunika zona.